Jacob Zuma oo Waraaqaha Safiirnimo ka Gudoomay Safiirka Somalia ee Konfur Afrika – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2015 8:17 b 0
Somalia, November 28, 2015-(Daljir)_Â Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, Jecob Zuma ayaa waraaqihiisa aqoonsi danjirnimo ka gudoomay danjiraha Somalia u fadhiya dalkaas, Jamal Maxamed Barrow.
Zuma ayaa aqalka madaxtooyada dalkiisa kaga guddoomiyay safiirrada 15 waddan oo ay Somalia ku jiro warqadaha aqoosniga danjirenimo; kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Canada, Malaysia, Panama, Zambia iyo Falastiin.
Danjire Baroow oo si weyn ugu dhex-muuqday safiirrada kale ayaa markii uu waraaqihiisa aqoonsiga safiirnimo u gudbinayay madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa xusay inuu salaan iyo dhambaal inuu uga sido madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuuna intaas ku daray safiirku inay Soomaaliya abaal lama illaawaan ah u gashay dalka Koonfur Afrika xilliyadii midab-takoorkii ka jiray Koonfur Afrika.
â€œWaxaan salaam iyo dhambaal kaaga wada madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan Koonfur Afrika garab-taagnenyn xilliyadii xuriyad-doonka ay ku jirtay 1970-yadii illaa 1980-yadii, sidaad la socoto Somalia hadda way kasoo ka baxayasaa dhibaatadii gaartay; iyadoo garab ka hashay idowga Afrika, waxayna u baahan tahay in la garab-qabto, waxaan aad ugu faraxsan nahay in aan kuusoo gudbiyo aqoonsigayga safiirnimo,â€ ayuu yiri Danjire Jamal Barrow.
Madaxweyne Jacob Zuma ayaa dhankiisa xusay inuu aad ugu faraxsan yahay qaabilaadda safiirrada cusub; isagoo sheegay in dowladdiisa ay soo dhaweynayso danjirayaasha ayna la shaqeyn doonto.